Akhriso:- War Saxaafadeed Maraykanka uu Ku Sheegay inuu Diley 100- Ka mid ah Al-shabaab
Tuesday November 21, 2017 - 21:56:55 in Wararka by Wariye Qoslaaye
War-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Maraykanka gaar ahaan qeybta Afrika ayaa lagu sheegay in gantaalo lagu garaacay dugsi lagu tababarayay dagaalyahano ka tirsan Alshabaab lagu diley boqol ka mid ah dagaalyahanadii la tababarayay.
Duqeyntan ayaa la sheegay in ay ka dhacday deegaan ka tirsan deegaanka Dodale ee gobolka Bay oo dhinaca Bari ka xiga degmada Diinsoor. Sidoo kale warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada Maraykanka ay sii joogteyn doonaan weerarada ay ku hayaan ururka Alshabaab meel walba oo ay ku tuhmaan sida xarumaha tababaraha iyo saldhigyadoodaba.
Weerarkan duqeynta ah oo warsaxaafadeedka lagu sheegay inuu dhacay tobankii subaxnimo ee saaka ayaa ka mid noqonaya weeraro gantaalo ah oo uu Maraykanku ku duqeynayay saldhigyada Al-Shabaab iyo weliba Daacishta Soomaaliya.
Halkan ka aqriso Warsaxaafadeedka;-